बाग्मतीमा पर्यटकीय सम्भावना
बाग्मती फोहोर पनि एकै दिन भएको होइन र सफाइको आजको अवस्था पनि एकैपटक आएको होइन । यसका लागि संस्थागत रूपमा सरकारले लामै प्रयास गरेको छ, खासगरी पूर्वाधार निर्माणका लागि । उपत्यकामा आवादी बढेसँग २०४० को दशकबाट ढल मिसिन थालेपछि बाग्मती कुरूप हुन थालेको थियो । त्यसबेलासम्म बाग्मती नुहाउने मात्र होइन, पिउने पानीको पनि स्रोत थियो भन्दा आजको पुस्तालाई अचम्म लाग्न सक्छ । वि.सं. २०५१ सालमा समितिबाट आरम्भ भएको संस्थागत प्रयास अधिकार सम्पन्न बाग्मती सुधार आयोजनासम्म पुगेको छ । आयोजनाले पानी प्रशोधनदेखि ढल निर्माणसम्मका काम गरिरहे पनि अझै आशातीत र पर्याप्त पूर्वाधार बन्न सकेको छैन । समितिदेखि आयोजनासम्म आइपुग्दा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रा. विदुर पौडेललगायत धेरैको योगदान अविस्मरणीय छ ।
(लेखक गोरखापत्रका कार्यकारी सम्पादक हुनुहुन्छ ।)